Sugar Smash အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - APKTom
3.115.202 for Android
ဒေါင်းလုပ် APK（89.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Sugar Smash: Book of Life - Free Match3Games.
LIFE THE Book of the Life ၏စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပွဲစဉ် -၃ ပဟေadventိဆန်းကြယ်မှုနှင့်အတူသကြားသကြားလုံးများနှင့်လဲလှယ်ရေးသက်တန့်များကိုကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားပါ။ ယနေ့ download လုပ်ပါ။
ဤကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်အားသတင်းများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကြားဖြတ်: Dia de Los Muertos အတွက်ဘ ၀ ၏စာအုပ်သည် COCO LOCO မှထွက်သွားပြီ။
NO MO 'ကိုကို! " နှင့်အပူပိုင်းကမ်းခြေများကသူတို့၏သဘာဝအုန်းသီးထောက်ပံ့ရေး၏သန့်ရှင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ မက္ကစီကိုကိုကိုအဘို့အ loco ကြောင်းပြောအန္တရာယ်ကင်း! ဒေသခံသူရဲကောင်း Manolo Sánchezကဒီအရိုးစုရဲ့ခံစားချက်အပေါ်ကိုကိုကိုကိုကိုကိုးအတွက်ချောကလက်အလှည့်ကျအတွက်သူ့ဘလော့ဂ်မှာ DIY သင်ခန်းစာတောင်မနေ့ကတင်ခဲ့သည်။ သင့်အားပုံမှန်စီစဉ်ထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်သို့သင့်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပါပြီ။
Channing Tatum, Zoe Saldana, Christina Applegate, Diego Luna, Ron Perlman နှင့် Ice Cube တို့၏အသံများပါ ၀ င်သည်။
သကြားချိုမြိန် churro စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပျော်စရာစွမ်းအားများ!
အဆင့်တိုင်းအတွက်အပတ်စဉ်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အတားအဆီးများနှင့်ပိုမိုများပြားသည်။
Facebook တွင်ရှိသည့်အတိုင်း https://www.facebook.com/bookoflifegame - တွစ်တာတွင်လေ့လာပါ။ @BookOfLifeGame - ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော http: // www သို့ဝင်ရောက်ပါ။ .bookoflifegame.com /
အခက်အခဲရှိလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးမှုစာမျက်နှာသို့ ၀ င်ပါ။ https://bookoflife.zendesk.com
DEVELOPER INFO: Jam City သည်ပလက်ဖောင်းလူမှုရေးဂိမ်းကစားခြင်းတွင် ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။ ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေယနေ့ကစားပါ။
ဘာအသစ်လဲ Sugar Smash: Book of Life - Free Match3Games. 3.115.202
Sugar Smash: Book of Life - Free Match3Games. (Gameplay Android)
Sugar Smash: Book of Life - 2021 Free Match3Game Review 1080p Official Jam City
Bettypvp Mobile Game Review
Sugar Smash: Book of Life 3.115.102
Sugar Smash: Book of Life 3.114.209
Sugar Smash: Book of Life - Free Match3Games. 3.113.107